Siyaasni uummata Oromoo - Siyaasa Oromiya
Home Unlabelled Siyaasni uummata Oromoo
Siyaasni uummata Oromoo
Sochiin #Qeerroo Ebla 2014 irraa eegalee humna hidhataa Wayyaanee dura dhaabbataa ture mallattoo inni ittiin beekamu keessaa inni tokko mallattoo tokkummaa Oromoo ta'uu isaati. Adeemsaa fi guddina mormii erga bara 2014 irraa eegalee adeemsifamaa jiru keessatti sochiin #Qeerroo tokkuummaa Oromoo bifa hiika qabuun ijaaree mul’isuu danda’eera. #Qeerroon gaaffii uummata Oromoo akka gaaffii nama tokkootti mul’iseera. Adeemsa qabsoo kana keessattis #Qeerroon humna tokkummaa Oromoo jedhamee nama hunda biratti fudhatama argateera. Hooggantoonni siyaasaa fi namoonni bebbeekamoon biyya Itiyoophiyaas #Qeerroodhaaf beekamtii kan kennan humna tokkummaa Oromoo ta’uu isaa waan beekaniifi. Kanaaf, #Qeerroon sadarkaa biyyoolessaa ijaaramee akka paartii Oromootti asba’uun uummata keenya hooggansa dhabee rakkataa jiru tokkummaadhaan hoogganee gara duraatti tarkaanfachiisuu danda’a.
Akkuman armaan olitti jedhe #Qeerroon humna Oromoo tokkummeessee ittiin adeemuu danda’u ta’us yeroo amma keessa jirru kana keessatti uummanni keenya gaddisa jalatti walga’u dhabee hooggansa biyyoolessaa tokko malee hafeera. Kanaan dura yeroo akka paartii siyaasaatti gurmaa’uun rakkina ture sanatti paartileen siyaasaa Oromoon qabu, aktiivistoonni, hayyoonnis gariin mana hidhaa, gariin immoo baqatanii biyya ambaa waan turaniif isaan kun hooggansa naaf hakennan jedhee isaan ilaalaa tureera. Qaamonni kunis haala ture keessatti waan danda’an raawwatanii darbaniiru. Rakkina kanta’e garuu qaamonni kanneen, keessumattuu paartileen siyaasa Oromoo, haala guutummaa Oromiyaa hammateen hooggansa kennuuf ga’umsaa fi humna osoo isaan hinqabaanne waan isaan haala amma jiru kana keessatti hooggansa yeroo waliin adeemuu kennuu danda’an itti fakkaatee ammas #Qeerroon isaan eeggataa jira. Dhugaan jiru garuu kana miti. Amma inni mana hidhaa ture hiikamee, inni biyya mabaa tures galee hundi isaanii waliinis ta’e kopha kophaatti hooggansa waalta’aa fi jabaa Oromiyaaf kennuu akka hindandeenye qabatamaatti mul’ateera. Paartilee siyaasaa Oromoo kan akkas isaan taasise immoo amala ‘doctrinaire’ ta’e qabaachuu, jechuun haala qabatamaa lafa irra jiru ilaalcha keessa osoo hingalchine sagantaa siyaasa isaanii qofa hojiitti hiikuuf rincicanii hojjechuu isaaniiti; yeroo waliin of fooyyessaa, of jijjiiraa adeemuu dadhabuu isaaniiti. Amalli kun mataa osoo hintaane eegee isaan taasise. #Qeerroon immoo akkuma adeemsa qabsoo isaa keessatti agarsiisaa ture amala rincicummaa akkasii kana waan ittiin irra aane qaba. #Qeerroon haala qabatamaa biyya keessa jiru ilaalcha keessa galchuudhaan socho’uu fi amala ofgeeddaraa/of fooyyessaa adeemuu qaba. Qeerroon 'Pragmatism' fi 'flexibility' qaba. Kun immoo taaktikii diinni isa loluuf baafatu irratti humana akka inni argatu taasiseera. Milkaa’inni siyaasaa immoo, keessumattuu haala amma biyya keenya keessa jiru keessatti, amala jijijjiiramaa adeemuu isa akka kan #Qeerroo kanaan malee ricicanii goganii hafuu isa kan paartilee Oromoosnaan milkaa’uu hindanda'u. The kind of leadership needed in today’s Oromia-Ethiopia should necessarily be pragmatic, connected, flexible, versatile, and agile. Amala akkasii har’a kan qabu #Qeerroo qofa. Kanaaf, kufaatii hooggansaa Oromiyaa keessatti mul’ateef falli #Qeerroon paartii siyaasaa ta’ee ijaaramuudhaan asba’uudha.